Sheeko Gaaban (qaybtii 6aad) | Awdalpress.com
Sheeko Gaaban (qaybtii 6aad)
Waxa Daabacay staff-reporter on Nov 28th, 2012 and filed under Daily Somali News, Education. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Ninkii Xirsi wax uu Dilla ka dhammaan waayaba, wax uu gaadhi xiiseeyaba, waxa uu maanta dhex joogaa magaaladii Hargeysa oo aanu ku soo tala gelin, in uu yimaaddana aanu haabkaba ku hayn, isla markaana aanu cidna ka garanayn, wax sahay ahna ma sidan. Sheekadana waxa uu innoo marinayey isaga oo Hargeysa weyn soo galay casarkii dheeraa. Xirsi oo sheekadii innoo wadaana waxa uu yidhi, ‘ Wagar! Maanta ma tani ayaa ii dambeysey, waxan ka fekeray in aan lug ugu jeexo illaa iyo reerihii, oo jahadiibaaba iga luntaye xaggeen ku hagaagi. Immiga ayaan garanayaaye, yaabka igu dhacay waxa uu taaganaa Magaaloy weligaaba is dhaaf dhaaf adiga ayaa laguu marti yahay.
Weligeedba ha is dhaaf dhaafto, kolba aan daar ku dhaygago. Immiga waxa la soo gaadhay casar gaabad oo cadceeddii aan eeganayeyba ay sii libdhayso. Dibjirka budhadhka sita ayaa dhinacyadayda mar maraya, baabuurta iyo baaskiilado ayaan kolba dhinac uga cararayaa. Tani waaba Imtixaankii la sheegi jiray.
Fikir iyo war war ayaan bilaabay, xaggeen u ciirsadaa. Gaajo iyo harraad ayaan aad u dareemayaa. Meel aan xataa biyo ka cabbo ma garanayo. Dadka magaalada aan ku arkayaana waa wada mashquul iyo dad nooc kale iigu muuqda, mararka qaar waaban ka cabsanayaa.
Goor dhaweydna meel aan joogay ayaa laba nin feedh, madax iyo haraati isla dhaceen, kaddibna budad iyo dhagxaan ayeyba isku soo qaateen. Waligayba miyaan arkay dad madaxa ku dagaallamaya sidii wananka. Tantoomaan aqaannee, feedhkaba miyaan arkay. Iyada oo aan Tamcaba la isla gaadhin ayaa mid dhulka loogu tuuray. Waa dagaalka magaaladu khatarsanaa! ayaa leehay. Waar dadku cadawsanaa, kuwii ag joogay ma kala qabanayaan ee way u soo godeeyeen. Mise kuwa kale ayaa isku bilaabay, oo meeshiiba macno kooxo dagaal ku ballamay ayey u egaatay.
Mashaqadaasi goob joog ayaan u ahaa, waxanay dhacday markii aan magaalada woxoogaa saacado ah joogay. Cabsi ayeyna I gelisay, oo waxaban ka baqay in dhallinta da’dayda ahi ay sidaa iila dagaallamaan. Laakiin ushayda iyo go’ayga ayaan hoosta kuwataa. Oo imaba yaqaannaane waxa aan isku diyaariyey in aan inta itaalkay ah is difaaco. Carruurtii Dillaad ee masiibadiiba waxba way iga qaadi waayeen.
Wakhtigii is guraye, waxana la soo gaadhay gabbal dhicii. Fikirkaygu waa fara badan yahay. Oo kolba meel ayuu qabsanayaa. Magaaladan buuxda ee aan haddana cidlada dareemayo, ee aanan garanayn meel aan ka galo iyo cid aan la hadlo, waxa mararka qaarkood igaga daran sida waalidkay iyo walaalahayba ii jeclaayeen iyo sida ay yeeli doonaan marka aan caawa iyo barri soo hoyan waayo. Amma ay gaajo I disho, ee aan aakhiro u hoydo.
Wax aan marxaladdaa ku jiraba waxa aan maqlay Eedaan….Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Hareeraha ayaan dayey meel laga eedaamayaba waan arki waayey, kolba dhinac ayaan u socday. Waxa aan isku meeraystaba waxa aan arkay wadaaddo waysooyin sita oo u sii luqluqanaya una sii cararaya salaadda, oo Masaajidka u socda. Inta aan cagta hoosta ka xaday ayaan wadaaddadii dhinaca ka raacay.
Eedaanku cod dheeraa, oo magaalada ma sidan ayaa eedaankeedu yahay ayaan isweydiinayaa. Waayo masaajidka laga eedaamayo iyo halka aan joogay iskuma dhawa. Haddana waxad mooddaa in agtayda laga Eedaamayo. Alla wadaadka Eedaamaya cod dheeraa…maxaa Ilaahay cod ugu deeqay ayaan iskula shawrayaa. Anigu markaa lama socon in Makrafoon iyo wax noocaasi ahi jiray. Amma minnaaradda laga Eedaamaa ay codka dheeraynayso. Dhulkii aan ka imidna waxan arki jiray wadaad cod yar oo aanay qayladiisu meel fog gaadhayn.
Ugu dambayn Masaajidkii gaadhay, waxanan ugu horreyn galay meel la ii tilmaamay oo biyo laga darsado, oo u dhaw halka lagu weysaysto. Harraad ayaaba I hayeye, horta biyihii ayaan ka dhargey, kaddibna waan ku wayseystay. Waysadaydu malaha saxba may ahayn oo intii aan gaadhiga la socday ayaan dhexda ku soo kaadshay, oo daahirba maan ahayn, laakiin haddana waan iska weysaystay.
Safkii salaadda ayaan dhinac ka galay, waxanan bilaabay in aan ka fekero bal halkii horta aan caawa seexan lahaa.
Sheekada la soco qaybteeda dambe.
This post has been viewed 4970 times.
Categories: Daily Somali News, Education